စည်းကမ်းရှိပါ ညီညွတ်ကြပါ…။ Solidarity | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » စည်းကမ်းရှိပါ ညီညွတ်ကြပါ…။ Solidarity
စည်းကမ်းရှိပါ ညီညွတ်ကြပါ…။ Solidarity
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 6, 2012 in Myanma News, Opinions & Discussion | 21 comments
ဒီနေ့တော့ သူများမဦးခင် လတ်တလော ထူးခြားသတင်းဖြစ်စဉ်များကို ပြောဂျင်တယ်။ နံပါတ်တစ်က ဂေဇက်ရွာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်း မိုးမခမီဒီယာမှာ ဖတ်ရတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှာ မူဆလင် ဆယ်ဦးအသတ်ခံရဒါနဲ့ ဆက်နွယ်တယ်။ ကောက်နှုတ်ပြရရင် “တောင်ကုတ်မြို့မှာ အခင်းဖြစ်ပွားမယ့် မနက်ပိုင်းက ကျောက်နီမော်ကိစ္စအကြောင်း မန္တလေးဂေဇက်လို့ အမည်ရှိတဲ့ အွန်လိုင်း ၀က်ဆိုက်တခုမှကူးယူသူက ကူးယူပြီး လှုံ့ဆော်စာတွေ ဝေထားပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးက မထုတ်ပြန်ပဲထားတော့ အဲဒီ ၀က်ဆိုက်က လှုံ့ဆော်တဲ့ သတင်းက လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို မြင့်တက်စေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။” လင့်ခ်ဂဒေါ့ http://moemaka.com/2012/06/than-soe-hlaing-%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8-%E1%80%BB%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%98%E1%80%9A/ ။ စာရေးသူအမည်က သန်းစိုးလှိုင် ဖြစ်ပီး ပြည်တွင်းဃလား ပြည်ပဃလား မသဲကွဲပါ။ ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ သဂျီးနောက်ကို အယ်ကေးဒါးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ လိုက်နေပါပီ။ သူ့ဆီဃ အကြွေးရရန်ရှိသူများ အမြန်ယူထားဂျဗာ။ ကြောင်ကြီးဂတော့ သူ့သမီးတော်လေးနဲ့ မနေ့ဂဗဲ မကြောက်ဖို့၊ အားကိုးစရာရှိ ရဲရဲအားကိုးဖို့၊ သူ့အဖေသဂျီးကို မဟာမြိုင်တောထဲပို့ ခေါင်းတုံးပီး ဖိုးသူတော်ဝတ်ပေးဖို့ အကြံပေးထားပါဒယ်။ အန်တီဆူးဂ ခရီးစရိတ်၊ အန်တီဝေဂ ဖိုးသူတော်ဝတ်စုံဖိုး တာဝန်ယူမယ်လို့ ကတိခံထားတာလည်း ရှိလို့ပါ။
နောက်တခုဃ ဂရင်းရိုင်ရယ်အရက်စက်ရုံသပိတ်မှာ ဦးဆောင်ဆန္ဒပြသူ အလုပ်သမား ၁၇ဦး အလုပ်ထုတ်ခံရဂျောင်းဗာ။ သစ်ထူးလွင် http://www.thithtoolwin.com/2012/06/grand-royal.html သတင်းထဲမှာရေးထားတာတော့ အလုပ်ရှင်ဃ အလုပ်သမားတချို့နဲ့ဗဲ ဆွေးနွေးပီး သပိတ်ကိုဖြိုခွဲတယ်။ သဘောတူညီချက်ထဲမှာ အဓိကတောင်းတဲ့ လုပ်ခလစာနဲ့ အခြားအချက်များ မပါလို့ အလုပ်သမားအများစု ဆက်လက်ဆန္ဒပြတော့ သုံးရက် အလုပ်မဆင်းရင် အလုပ်ဖြုတ်ပိုင်ခွင့် အကြောင်းပြပီး ခေါင်းဆောင်၁၇ဦးကို အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ဒီနေရာမှာ အလုပ်မလုပ်ခင် အလုပ်သမားနဲ့ အလုပ်ရှင်တို့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ သောက်စည်းကမ်းဂျက်တွေကို ဖယ်ထားလိုက်။ အဲဒါတွေ ခေတ်ဟောင်းမှာ ကျန်ခဲ့ပီ။ ကျုပ်တို့ရွာထဲဃ ကစော်သမား အရက်သမား အမူးသမား မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သမား ခွက်ပုန်းသမားတွေလည်း ဂရင်းရိုင်ရယ်အရက်ကို သပိတ်မှောက်ကြပါ။ ကျန်သူများလည်း အဲဒီစက်ရုံထွက် အခြားအဖျော်ယမကာ သောက်ရေသန့် အခြားပစ္စည်းများကို ရှောင်ကြဉ်ဂျပါ။ အလုပ်သမားဂျင်း အဖိနှိပ်အခံဂျင်း လွတ်လပ်မှုလိုလားသူတိုင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြဂျဗာ။ မတရားဖိနှိပ်တဲ့ စည်းကမ်းဂျက်တွေကို သီးမခံနိုင်လို့ ဆန္ဒပြဒယ်ဆိုမှ ရူးသလို ပေါသလို leeလိုလို မှိုလိုလို လာမလုပ်ပြနဲ့။ နောက်ဆုံး ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ အခြေအနေ ရောက်လာရင် ကုမ္မဏီသူဌေး စက်ရုံသဌေးတွေပိုင်တဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေအားလုံး အဲဒီသောက် ဥပဒေ စည်းမျဉ်းတွေလိုဗဲ အတိတ်မှာ ထားဂဲ့ရလိမ့်မယ်လို့ မြန်မာပြီအလုပ်သမား အထွေထွေသပိတ် တာဝံခံ အာဠာဝကသခင်ကြောင်ကြီး ဒီနေရာဂ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သေးပန်းပြဒယ်။
အတိတ် အရိပ်ဆိုဗေမဲ့ သပိတ် ပိုအရေးကြီးဒယ် နာနာရေ..
နောက်ဆုံးတချက်အနေနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောက ဦးဆောင်မှုနေရာမှာရှိနေတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကို အကြံပေးဂျင်ဗာဒယ်။ အဂု ဖြစ်သွားတဲ့ ရခိုင်-မွတ်စလင် အရေးအခင်းဆိုတာ ဟိုးအရင်ထဲက တအုံနွေးနွေး ရှိနေတာဗာ။ ထပ်ချဲ့ပြောရရင် ရခိုင်တပြည်ထဲမဟုတ် တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ရှိနေပါတယ်။ ဘယ်သူ ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့ ပြသနာရင်းမြစ် ရှာတာလည်းရှာ.. ရေတိုမှာ ထပ်ဖြစ်လာမည့် အဓိကရုဏ်းများကို တားဆီးနိုင်ဖို့ နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လူထုထောက်ခံမှု ရထားတဲ့ အန်အယ်ဒီနဲ့ ၈၈အဖွဲ့တို့ ကော်မတီများဖွဲ့ပီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေအတွက် တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိပီး လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသူ မွတ်စလင်များကို ရွေးချယ်မွေးယူဂျဗာ။ ၈၈အဖွဲ့မှာတော့ ကိုမြအေးလို ထင်ရှားတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းရှိထားတယ်။ သူ့ကို ဝိုင်းဝန်းမြှင့်တင်ပေးရမယ်။ ကိုမိုးသီးဘလော့ဂ်မှာ http://komoethee.blogspot.com/2012/06/blog-post_6448.html သူနဲ့မက်ဆင်ဂျာ ဂျာနယ် အင်တာဗျူးလုပ်ထားတာကို တင်ထားတဲ့အထဲဂ ကောက်နှုတ်ပြရရင် “ကျွန်တော် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မှန်တယ်၊ ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ သန်း ( ၆၀ ) အတွက် ပဲ အလုပ်လုပ်မှာပါ။ လူမျိုးရေးအပေါ် ကျွန်တော့် ဘာသာရေးအပေါ် မလိုက်ပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စကို ထပ်ပြောပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို စ္စလာမ်အရေးလို့လုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အန္တရယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကာ
ကွယ်တာဆီးရမှာဖြစ်သလို ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုဗန်းပြပြီး အခြားသောအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို စည်းခြားဆက်ဆံဖို့ကြိုးစား နေသူတွေကိုလည်းသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။”
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်လို့မရသလို အမျိုးသားရေးကို စွန့်ပစ်လို့လည်း မရဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ လူဦးရေကို တွက်ကြည့်ပါ။ သူတို့နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ လူဦးရေကို ကြည့်ပါ။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ပြိုဆင်းလာမဲ့ အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်တယ်ဆိုတာ သဘာဝကျတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရမဲ့ ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီက ပြိုဆင်းလာမဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အရေးကိစ္စကို ဗန်းပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အရေးကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ မှားပါတယ်။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လက်လည်း မခံနိုင်ပါဘူး။ အလားတူ ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့က မြန်မာပြည်မှာ နေပြီး၊ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆန်ကိုစားပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကြီးတယ်။ အဲဒီအတွက် အမေကို ကျော်ပြီးဒွေးတော်လွမ်းနေစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုပါ။” အားကိုးပါဒယ် ကိုမြအေးခင်ဗျား။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေတ်မှာ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် မူဆလင်ဘာသာဝင် ဆရာကြီးဦးရာဇတ် ရှိခဲ့သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေတ်အတွက် ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေး အဆင်သင့်ရှိပေးနေမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုမြအေးသာ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ရဲရဲတောက် သမီးလေး ဝေနှင်းပွင့်သုန်နဲ့ ကြောင်ကြီး အတူလက်တွဲပီး မတူကွဲပြား နှစ်တူပဲများ အလှူပွဲသွား ပါရစေလို့..
အော် ဒို့ဂေဇတ် နာမည်ကြီးဖို့ ဖန်လာချင်တော့လည်း..
ဓါးခုတ်ရာလက်ဝင်လျှိုရတဲ့ အပေါက်မျိုး ကြမှပဲ.
သဂျီးကတော့ ဘယ်ဘက်ကပဲ နာမည်ကြီးကြီး ..
ကြီးဖို့သာ လိုရင်းမို့ ခပ်ပြုံးပြုံးကြီး လုပ်နေမှာ မြင်ယောင်သေး..
ဂရင်း အရက် ကိတ်စ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး / အဲဒီအရက်ဟာ ဒီနိုင်ငံရှိ အခြေခံလူတန်းစားအားလုံး ရဲ့၇၀ ရာနှုန်းနီးပါးရဲ့အားပေးမှု ရှိပါတယ် ။
ဒါကတော့ မန်းဂေဇက်ကို လာဖတ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
ဒီက မန်ဘာတွေကလူမျိုးရေး ဘာသာရေးခွဲခြားမှု့ကို ဆန့်ကျင်လေ့ ကန့်ကွက်လေ့ရှိတာ အထင်အရှားပါ။
ဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြီး သူကြီးမင်းကို ပြောချင်တာတော့ရှိတယ်..။
ဒီဆိုက်ကြီးကို သူကြီးမရှိချိန်မှာ ပက်လက်ကြီးပစ်ထားပြီး ရေးချင်တာဝင်ရေးတာကို ဒီလိုပဲကြည့်နေမှာလား…။
စည်းကမ်း နဲ့မညီ ဆိုက်ထဲမတင်သင့်တဲ့ စာတွေကွန်မင့်တွေကို အနည်းဆုံး (ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်) လို့ဖေါ်ပြပြီး delay လုပ်ပေးဘို့ စိတ်ချရသူနှစ်ယောက်လောက်ကို တာဝန်မပေးချင်ဘူးလား..??
သူကြီးက အဲဒီလူတွေ ရှာနေတာ
နှစ်ယောက်ရွေးမယ်ဆို တစ်ယောက်က ဦးပါ ဖြစ်သင့်ကြောင်းပါ
မြှောက်ပေးတာ မဟုတ်ပဲ ရွာအတွက် စိတ်ရင်းနဲ့ ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါသည်
ကျုပ်က ကိုယ့်ပိုစ့်တောင် ကိုယ် ကံကောင်းလို့ ဖတ်ခွင့်ရနေတာ…
အင်း…. စိတ်ချ ကိုနိုရေ….
ကျုပ်တို့သူကြီးက ဒါမျိုး မလုပ်ရေးချမလုပ်…
ကျနော်လဲ ကျနော်တို့ရွာနာမည်ကြီးနေတာတွေ့ ရတယ် မနေ့ကနေ့လည် ဒီဆိုက်မှာစတွေ့ တာပဲ http://www.kaladanpress.org/burmese/
ညနေရုံးပြန်တော့ ဗိုလ်ကလေးဈေးမှတ်တိုင်နားလိုင်းကားစောင့်နေရင်း ကွမ်းယာဆိုင်က ဖော်ရိန်နာကောင်လေးနှစ်ယောက်ပြောတာကြားမိတာကတော့ `ညနေလိုင်းပေါ်ရောက်ရင်လင့်ပေးလိုက်မယ် မန်းတလေးဂေဇက်တဲ့ မင်းအဲ့မှာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့´ လေ….
ဒါ့ ကြောင့် သ္ခင်ကြောင်ဂျီးလို့ ခေါ်ပေဒဂိုး——-။
ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလူဒွေအတွက် ၊ ဘယ်လိုအမြင်ဒွေရှိသင့်ဒယ်၊ဘယ်လိုခံယူရမယ်၊ဘယ်လိုအကျိုးအပြစ်ဒွေဆိုဒါ ၊တစ်ခါတည်း ကွင်းကနဲ၊ ကွက်ခနဲ — ၊ 88 ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကိုမြအေး ရဲ့အမြင်ဟာ၊အလွန်ပဲ အမျိုးသား အကျိုး၊ ညီညွတ်ရေးအခြေခံ ပါလှပါတယ်။မနေ့ကလည်း ဆူးလေကိစ္စမှာ သူသွါးပြီးမေတ္တာ ရပ်ခံနေ တာတွေ့ ရတယ်။
မိမိ အဖွဲ့စည်းမှဆိုပြီး အစွန်းရောက်တာဖြစ်ဖြစ်—-၊
နောက်ဆုံး ချစ်လွန်းလို့အစွန်းရောက်ရင်တောင် — ဆရာဝန်မကလေးအဖြစ်ဆိုးတွေရင်နာစရာပါ။
အစွန်းရောက်တာမှန်သမျှ ရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ဟာ — ရင်နာထိတ်လန့်စရာ၊ကျေကွဲစရာတွေနဲ့ပဲဆုံးရှုံးရတာတွေနဲ့၊အဆုံးသတ်ကြရတာများပါတယ်၊ နိုင်ငံတော်မှာနေထိုင်ကြသူမှန်သမျှ ၊ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ကိုယ့်ရေမြေ၊ကိုယ့်နိုင်ငံသားများ အတွက်ရှေတန်းတင်ပြီး ကြည့် မှ နိုင်ငံရဲ့ပြည်သူကောင်းတွေဖြစ် မှာပါပဲ။
နိုင်ငံ ရဲ့ပြည်သူပြည်သားကောင်းတွေများလာမှ ၊သည်နိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်ပါ့ မဗျား။
ကတော့ ကိုကြောင်၈ျီး သာဓု သာဓု သာဓု ။
ဂယ်တော့ ရွာထဲက သတင်း၊ အတင်း အစုံပလုံကို အနံ့ ခံပြီး အ၀ှာပြုနေကြတာပါ
အဲမှာ ကောင်းတဲ့အနံ့ ဆို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရေးလိုလို ပြန်ဖွမပေါ့ဗျာ
မကောင်းတဲ့ အနံ့ ဆိုတော့လဲ ရွာဘက်ကို ဘော်လီဘောပုတ်ထုတ်သွားတာနေမပေါ့..
ဒီအထာတွေ သဂျီးက နပ်နေလောက်ပါဘီ..နော်..အူးလေး..
” Wai Hnin Pwint Thone ”
” Pretty Myanmar Great Girl “
ကံ ကံ၏ အကျိုးသာ ဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် ပြုသူထံသို့ ကံကြမ္မာတစ်ပါတ်
ချောင် (ဂျောင် ) ထူးမှာ..
မန္တလေးဂေဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်က..၇နှစ်သက်တန်းရှိတဲ့.. ပုံနှိပ်သတင်းစာကျောထောက်နောက်ခံနဲ့.. သတင်းနဲ့..သုံးသပ်ချက်..ရသ..ဓါတ်ပုံပါမကျန်ခြုံငုံမိအောင် (အမာခံ.. မန်ဘာ၈ထောင်ကျော်နဲ့)တင်နေ၀င်ထွက်ဖက်ရှုရေးသားနေတဲ့.. ဖေ့စ်ဘုတ်လို ၀က်ဘ်ဆိုက်ပါ..။
ဒီရက်ပိုင်းတော့.. ဆာဗာအ၀င်အထွက်ထဲ.. တရက်နဲ့..ပုံမှန်၂သောင်းဝန်ကျင်ကနေ.. ၄သောင်း၈ထောင်းအထိတက်သွားတယ်..။ တက်နေဆဲပဲ..။ ဆာဗာဖိုးနည်းနည်း.. မျက်ခုံးလှုပ်နေမိပါရဲ့..။
အာရပ်စပရင်းကို.. ဖေ့စ်ဘုတ်တွစ်တာနဲ့.. စပြီးတွန်းတင်လုပ်ကြတယ်ပြောကြတာပဲ..
မြန်မာပြည်ရဲ့.. ထင်ရှားတဲ့..အဖြစ်အပျက်ကြီးတွေကို.. မန္တလေးဂေဇက်က.. ထပ်တူပါဝင်စီးမျောနေရတာ..သဘာဝကျပါတယ်..
သဘာဝကျကျပဲ… နေချင်တာမို့.. စည်းကမ်းတွေကို.. ထပ်ထပ်ကျပ်လာဖို့..မရည်ရွယ်ပါဘူး..
အမြင် ကြည်လင်သူ/မကြည်လင်သူများ..ကိုယ်တိုင်ရွာသူားအဖြစ်ခံယူပြီး.. ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်စာကိုယ်..တာဝန်ယူ.. ဖြန့်ဝေနိုင်ကြောင်း.. ဝေဖန်နိုင်ကြောင်း.. (အခြေခံစည်းကမ်းလိုက်နာမယ်ဆို) လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်ကြောင်း..။
ကိုမြအေးနဲ့ အင်တာဖြူး ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ လေးစားပါတယ် ကိုမြအေး။
ဒါနဲ့ ကိုကြီးညောင် တို့ကတော့ သဂျီး သမီးတော်လေးလဲချိန်ရဲ့ … နောက်ဆုံး ကိုမြအေးသမီးလေးတောင် မချန်တော့ပါလား ကိုညောင် ရယ်။ :-)
တစ်သက်လုံး ဖုံးသမျှ ကုန်းကာမှ ပေါ် ဆိုတဲ့စကားလိုပါပဲ။
တစ်ပုဒ်လုံးဖတ်သမျှ ပြီးကာမှ…… ကြောင်ကြီးဟာ ကြောင်ကြီးပါပဲ
စာတွေကို နားလည်အောင် မနည်း အားစိုက်ဖတ်ရတယ်။
စကားဆုံတုန်း ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်- သတ်ပုံအဖွဲ့ Retire ယူသွားပြီ ဖြစ်ပါကြောင်းးးးးးးးးးး
ကိုမြအေးပြောသွားတာကောင်းပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို မှန်ကန်တိကျတဲ့ ဥပဒေ ရှုဒေါင့်ကပဲ ဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူသင့်ပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို ဘာသာရေးရှုဒေါင့်က ကြည့်ပြီး ဘာသာရေးအဓိကရုန်းတွေဖြစ်မှာစိုးမိပါတယ်။
ကိုကြောင်ဂျီး ပို့စ်ဂို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံဘာဒယ်
စိတ်ဓါတ်မှန်ကန်ရဲရင့်တဲ့ ကိုမြအေး ကိုလည်း လေးစားချီးကျူးပါဒယ်
အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ကွန်မန့် ၀င်ပေး အားဖြည့်ထားသူ moe kaung` အားလည်း